Wafdi Ka Socda Itoobiya Oo Ka Degay Somaliland, Arrimaha Saska Ku Abuuray Ee Ay Kala Hadlayaan Madaxweyne Biixi Iyo Booqashadii Saraakiisha Masar Oo Xiisad Kale Abuurtay - Jigjiga Online
HomeSomalidaWafdi Ka Socda Itoobiya Oo Ka Degay Somaliland, Arrimaha Saska Ku Abuuray Ee Ay Kala Hadlayaan Madaxweyne Biixi Iyo Booqashadii Saraakiisha Masar Oo Xiisad Kale Abuurtay
Hargeysa (JO) – Wafdi ka socda dowladda Itoobiya oo aan hore loo sii shaacin safarkooda ayaa maanta gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.
Wafdigan oo uu hogaaminayo Wasiirka Maaliyada Itoobiya, Axmed Shide ayaa waxa si weyn loogu soo dhaweeyay madaarka Hargeysa ee Cigaal, iyada oo halkaasi ay ku qaabileen xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland.
Sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay xaqiijiyeen, Wafdiga Axmed Shide ayaa xukuumada Somaliland kala hadli doona xidhiidhka cusub ee Masar, maadama ay dowladda Itoobiya ay xasaasiyad ka qabto xidhiidhkaas.
Wafdiga dowladda Itoobiya ayaa su’aalo ka weydiin doona madaxweynaha Somaliland saldhiga millateri oo maalmihii ugu dambeeyey la sheegayey in dowladda Masar ay ka sameysaneyso Saylac, taas oo tuhunkiisu dhashay markii ay wafti ka socda Masar yimaaddeen Somaliland toddobaad ka hor.
Sidoo kale madaxweyne Biixi iyo Wafdigaasi ayaa ka wada-hadli doona xidhiidhka labada dhinac oo ay ugu muhiimsan yihiin ganacsiga iyo iskaashiga amniga.
Socdaalka Wafdiga Axmed Shide ayaa ku soo beegmay xili ay dhawaan magaalada Hargeysa tageen saraakiil Masaari ah oo xukuumada Biixi ka dalbatay inay siiso saldhig millateri, sida warar hoose tibaaxeen.
Dawladda Itoobiya ayaa u aragta xidhiidh dhex mara Masar iyo Somaliland inuu sii kordhin doono xiisadda wabiga Nile ee ay labada dal isku maan-dhaafsan yihiin, waxaanay Itoobiya is tusinaysaa in Masaaridu ay dhinaca bari kaga furayaan furin kale oo haddii xaaladdu xumaato ay ka carqaladayn karaan danaheeda.